Ahoana no mitazona ny gorodona vita amin'ny hazo - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana no mitazona ny gorodona vita amin'ny hazo
1. Aorian'ny fametrahana sy apetraka ny gorodona, ny fikojakojana ny isan'andro dia zava-dehibe indrindra mandritra ny fampiasana maharitra, izay misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainana ny serivisy. Na dia manana tombony betsaka aza ny gorodona laminate, toy ny fanoherana mitafy, ny fanoherana ny vatany, ny fanoherana ny fampihenana, ny fanoherana fiatra, ny fanadiovana mora, ny fikolokoloana ary ny fitoniana tsara, ny fikojakojana siantifika dia tsy azo atao tsinontsinona. Satria vitsy ny olana ateraky ny fampiasana tsy ilaina sy fikojakojana ny tany.
2, matetika dia avelao ho maina sy tsy madio ny tany, aza manasa rano betsaka, mitandrema mba tsy hisitrika rano mandritra ny fotoana lava. Raha misy takelaka misy menaka sy menaka eny ambony gorodona, azafady diniho ny manala azy ireo amin'ny fotoana mety.Ireo dia afaka mampiasa fitaovana mafana mitoto ety an-trano sy rano mafana ho an'ny fitsaboana ny tsara indrindra. Aza mampiasa ranon-dronono toy ny rano alkali, asidra oxalic, rano savony sns ... mba hikasika ny gorodona, ary aza mampiasa fitaovana mirehitra toy ny entona solika sy ny rano hafanana hafa hamongotra ny gorodona. Gorodona hazo matevina sy gorodona hazo matevina misy sosona matetika dia mihazona hatrany gloss ary mampihena ny fahanterana amin'ny loko sy fanaovana akanjo.
3. Asaina mametaka kapoka eo am-baravarana mba hisorohana ny mason-javony tsy hampidirina amin'ny tany ary hanimba ny gorodona; tokony ho voatahiry tsara ny entana mavesatra; aza mikipy rehefa mihetsika fanaka, aleo atsangana.
4. Rehefa tsy misy olona mipetraka ao an-trano dia tandremo ny manokatra varavarankely ho an'ny fipetrahana.
5. Raha rendrika amin'ny tany manokana ny gorodona, tokony hosasana amin'ny rano haingana ny rano, ary tokony ho lazaina ara-potoana ny mpivarotra gorodona.
6. Raha mampiasa trano famafazana ny gorodona ny tranon'ny mpanjifa dia avereno fatratra ny tany arakaraka ny fepetra takiana amin'ny herin'ny geothermal mba hialana amin'ny fanitsiana toetr'andro ary mety hisy fiantraikany amin'ny tany.
Ahoana no mitazona ny gorodona vita amin'ny hazo Ny atiny mifandraika